Niezaka nisintona azy ny zokiny ka niara-nipitika izy sy ilay zandriny, noho ny herinaratra. Tsy nahatsiaro tena ilay zaza ka nentina teny amin’ny hopitaly. Avotra ny ainy saingy tsy mbola afaka mandeha. Raha ny fanazavana avy tamin’ny fianakaviany, nisy fiantraikany tamin’ny fon’ilay ankizilahy ilay herinaratra ka nitarika izao tsy fahafahany mandeha izao. Ny angom-baovao hatrany no nahalalana fa tsy mba namangy na nitondra fanampiana ilay tompon’ny auto-tamponneuse. Ny alahady hariva io ihany, tonga teny amin’ny toerana nisehoan’ny loza nanao «constat» ny zandary. Ny maraimben’ny alatsinainy 17 jona, nangoron’entana avy hatrany izy ireo. Araka ny voalazan’ny zandary, ny tongotra mando nifandray tamin’ilay herinaratra no nampidi-doza. Nilaza ny fianakavian’ilay tovolahy kely niharam-boina fa hitsabo ny marary aloha, ka aorian’izay dia hametraka fitoriana izy ireo.